1 8-Jul-2014 Report by Nils Muiznieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visit to Romania, from 31 March to 4 April 2014 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
2 23-Jun-2014 Report by Nils Muiznieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visit to Montenegro, from 17 to 20 March 2014 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
3 16-Apr-2013 Report by Nils Muiznieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visit to Greece, from 28 January to 1 February 2013 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
4 12-May-2014 Report by Nils Muiznieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visit to Georgia, from 20 to 25 January 2014 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
5 17-Feb-2015 Report by Nils Muiznieks, Council of Europe Commissioner for Human Rights, following his visit to France, from 22 to 26 September 2014 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
6 3-Nov-2015 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Ukraine, from 29 June to 3 July 2015 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
7 11-Jul-2016 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Ukraine, from 21 to 25 March 2016 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
8 4-Mar-2014 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Ukraine from 4 to 10 February 2014 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
9 26-Nov-2013 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Turkey from 1 to 5 July 2013 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
10 13-Oct-2015 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the Slovak Republic, from 15 to 19 June 2015 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
11 12-Nov-2013 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the Russian Federation from 3 to 13 April 2013 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
12 30-Sep-2013 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the Republic of Moldova from 4 to 7 March 2013 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
13 14-Oct-2014 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the Netherlands, from 20 to 22 May 2014 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
14 9-Apr-2013 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the former Yugoslav Republic of Macedonia from 26 to 29 November 2012 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
15 21-Feb-2013 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to the Czech Republic from 12 to 15 November 2012 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
16 9-Oct-2013 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Spain from 3 to 7 June 2013 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
17 8-Jul-2015 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Serbia, from 16 to 20 March 2015 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
18 15-Oct-2015 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to San Marino, from 9 to 10 June 2015 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
19 10-Jul-2012 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Portugal from 7 to 9 May 2012 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights
20 15-Jun-2016 Report by Nils Muiznieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Poland, from 9 to 12 February 2016 Muiznieks, Nils ; Council of Europe (COE). Office of the Commissioner for Human Rights